AdTruth: Aqoonsiga Dhageystayaasha Universal Mobile | Martech Zone
Talaado, Disembar 10, 2013 Talaado, Disembar 10, 2013 Douglas Karr
AdTruth waa barnaamij ku-meel-gaar ah oo u oggolaanaya suuqleyda inay aqoonsadaan adeegsadayaasha shabakadda moobiilka iyo barnaamijyada. AdTruth waxay la shaqeysaa tikniyoolajiyaddaada jira si loo aqoonsado, loo bartilmaameedsado loona raad raaco isticmaalayaasha iyadoo la ilaalinayo asturnaanta macaamiisha iyo doorashada.
Inta badan teknoolojiyada aqoonsiga isticmaalaha waxay u baahan yihiin soo galid si loo aqoonsado qofka iyo / ama cookie si loola socdo. Dhibaatada ku jirta buskudku waa in badanaa la tirtiro oo aysan sidoo kale joogteyn. AdTruth waxay adeegsaneysaa qalab aqoonsi joogto ah - ma ahan buskud - oo ixtiraamaysa ha la socon raadinta daalacayaasha. Waxay ugu yeeraan tan Aqoonsiga Qalabka Casriga ah.
Beegsiga iyo dib u habeynta aaladda mobilada waa sax oo waxay dhacdaa waqtiga-waqtiga dhabta ah, taasoo u oggolaaneysa xayeysiiyaha ama daabacaha inay si firfircoon u dhigaan fursadaha iibka, kor u qaadista, ama dib-u-habeynta dayaca. SIDA aaladaha shaqsiyadeed loo aqoonsado, xayeysiiyayaashu waxay isku dari karaan aqoonsiga aaladda iyo xogta macmiilka si ay u horumariyaan astaamaha dhagaystayaasha.
Tags: daacadnimoaqoonsiAqoonsiga Qalabka Casriga ahbartilmaameedtrackaqoonsiga isticmaalaha